Muxuu farmaajo kalahadlay dowlad Goboleedyada taageersan? - Awdinle Online
Muxuu farmaajo kalahadlay dowlad Goboleedyada taageersan?
Xarunta Madaxtooyada ee Villa Soomaaliya ayaa waxaa xalay kulan ku yeeshay Madaxweynaha muddo xileedkiisa uu dhamaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda xilgaarsiinta, Madaxweynayaasha Maamul Gob oleedyada, Galmudug, Hir-Shabeelle & Koonfur Galbeed & Guddoomiyaha Gobolka Banaadir.
Kulanka ayaa wararka la helay waxaa ay sheegayaan inay uga hadleen xaalada siyaasadeed ee dalka, khilafka weli ka taagan doorashada Soomaaliya iyo sida ugu macquulsan oo xal looga gaari karo.
Madaxweynayaasha Galmudug, Hir-Shabeelle & Koonfur Galbeed ayaa Madaxweynaha muddo xileedkiisa uu dhamaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo la wadaagay wixii ay isla soo gaareen Madaxweynayaasha Dowlad Goboleedyada Jubbalan d & Puntland oo labadii maalmood ah shir gaar ah u socday.
Wararka ayaa sheegaya in arrimaha ay kala hadlayaan ka mid tahay arrinta muddo kordhinta ee laga shaki qabo in Golaha Shacabka ku dhaqaaqo iyo shirka soo socda ee Afisyooni sidii wadajir looga qeyb geli lahaa iyadoo is faham uu jiro.
Previous articleAl-Shabaab oo weeraray Saldhig ay ku sugan yihiin Ciidamada dowladda